मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेझैँ गुल्मीमा गोकर्ण विष्ट कमजोर छन् ?
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार गुल्मीमा आफूनिकट जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा गोकर्ण विष्टलाई सडकमा पुर्‍याउने भन्दै भाषण गरे । गुल्मीको तम्घासमा आयोजित ओली समूहका कार्यकर्ताको भेलामा पुगेका उनले आफ्नो पक्षमा विष्ट नभएकै कारण धम्कीपूर्ण भाषणबाजी मात्र गरेनन् चुनाव जित्ने मन भए बाटो सच्चाएर आउन चेतावनीसमेत दिए ।
उनले गरेको भाषणले आगामी निर्वाचनमा विष्ट पराजित हुन्छन् भन्ने नै हो । तर, के मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेझैँ गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नं. २ मा कमजोर भएकै हुन् त ?
तर, जिल्लास्तरमा भएका कमिटीका सदस्यलाई आधार मान्ने हो भने विष्ट असुरक्षित छैनन् । बरु गुल्मी क्षेत्र नं. १ मा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली असुरक्षित छन् । नेकपाका नेताहरू पनि नेकपाका विभाजनको असर गुल्मीमा ज्ञवालीलाई बढी पर्ने बताउँछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा विष्ट र ज्ञवालीले पाएको मत परिणामले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
विस २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीसँग समीकरण गरेर निर्वाचनमा जाँदा ज्ञवालीले २ हजार मतान्तरले कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए भने विष्टले १५ हजारको मतान्तरमा विपक्षी कांग्रेसका चन्द्र केसीलाई पराजित गरेका थिए ।
स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष बलियो
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विष्टलाई निर्वाचनमा सडकमा पुर्‍याउने बताइरहँदा स्थानीय तहदेखि जिल्लामा प्रचण्ड-नेपाल समूह बलियो देखिन्छ । १२ वटा स्थानीय तहमध्ये आठवटामा तत्कालीन नेकपाबाट प्रमुख उपप्रमुख विजयी भएका थिए । त्यसमध्ये सातवटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख प्रचण्ड-नेपाल समूहमा खुलेका छन् । छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थ र उपप्रमुख नर्मदा भण्डारीबाहेक अरू प्रचण्ड-नेपाल समूहमा लागेका छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसी र उपाध्यक्ष रीता खड्का, इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट र उपाध्यक्ष विमला केसी, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रीतबहादुर थापा र उपाध्यक्ष देवा अर्याल, धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसाल र उपप्रमुख सीता भण्डारी, मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा र उपप्रमुख कमला शर्मा, रूरू गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतम र उपप्रमुख लक्ष्मी पन्त प्रचण्ड–नेपाल समूहमा लागेका छन् ।
जिल्लाका सत्यवती, कालीगण्डकी, चन्द्रकोट र गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा भने कांग्रेस विजयी भएको थियो ।
प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि प्रचण्ड नेपाल समूह बलियो
११ जना प्रदेश कमिटी सदस्य रहेको गुल्मीमा बहुमत सदस्य प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन् । पार्टी एकतापछि बनेको पार्टीमा ११ जना गुल्मीबाट नेकपामा प्रदेश कमिटी सदस्य थिए । जसमध्ये आठ जना प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन् भने दुई जना मात्र ओली समूहमा छन् । प्रदेश कमिटीका एक सदस्य बोमबहादुर खड्कको मत्यु भइसकेको छ ।
यता जिल्ला कमिटीमा पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह बलियो छ । पार्टी एकीकरणपछि बनेको १ सय ४५ सदस्यीय कमिटीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहतर्फ ९५ र ओलीतर्फ ३५ जना खुलेका छन् । बाँकी १० जना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, ४९ सदस्यीय जिल्ला सचिवालयमा २८ जना प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन भने र १८ जना ओली समूहतर्फ खुलेका छन् । तीन जना खुलेका छैनन् ।
प्रदेशका सांसद को कता ?
लुम्बिनी प्रदेशसभामा गुल्मीबाट प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा १ गरी ५ सदस्य छन् । गुल्मी क्षेत्र नं. १ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित कमलराज श्रेष्ठ ओली समूहका हुन भने अर्का सांसद एवं सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बराल प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन् । निर्वाचनको समयमा प्रचण्ड-नेपाल समूह रहेका श्रेष्ठ पार्टी विभाजनपछि कित्ता परिर्वतन गरेका हुन् ।
त्यस्तै, क्षेत्र नं २ बाट खड्ग केसी ओली समूह र दिनेश पन्थी प्रचण्ड समूहतर्फ लागेका छन् । केसी पूर्वएमाले हुन् भने पन्थी पूर्वमाओवादी हुन् । गुल्मीमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने अर्की महिला सांसद गीता थापा प्रचण्ड-नेपाल समूहतर्फ खुलेकी छन् । थापा पूर्वमाओवादी हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मैना भण्डारी ओली समूहमा खुलेकी छन् भने गुल्मीबाटै राजनीतिमा स्थापित भएकी रामकुमारी झाँक्री प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।
जिल्ला नेताका आफ्नै दाबी
प्रचण्ड-माधव समूहका गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा जिल्लामा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष बलियो रहेको बताउँछन् । ओली समूहमा जिल्लामा आएर विधानमै नभएको ४ सय ९९ कमिटी गठन गरी पदको लोभ बाँडे पनि जनता आधिकारिक पार्टीमै भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘सत्ता टिकाउन पदको लोभ बाँडिएको छ । भोलि हामी पनि हेरौँला, जनमत कता हुन्छ । जनता पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन् । जनता आधिकारिक पार्टीको पक्षमा लाग्छन् । त्यो पार्टी प्रचण्ड-नेपाल समूह हो ।’
ओली समूहका नेता बालसिंह काउछाले प्रचारमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भनिए पनि जिल्लामा ओली पक्ष बलियो रहेको बताए । उनले हल्ला भएजस्तो प्रचण्ड-नेपाल पक्ष बलियो नभई वास्तविकता त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको बताए ।
उनले जिल्ला कमिटीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको वर्चस्व हुनु स्वाभाविक भए पनि पछिल्लो समय कमिटीका सदस्य मूल थलोमा फर्किन थालेको बताए । उनले विष्टको व्यवहार, शैलीबाट आजित भएकै कारण विष्टको साथ सदस्यले छाड्दै गरेको बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७, १७:१७:००